Népal: Ny Fandringanana Tao Gaur · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2017 14:43 GMT
Ny 21 martsa 2007, nitrangana zavatra tsy azo noeritreretina tany Gaur, tao amin'ny lemak'i Terai afovoany. Nifanandrina ny vondrona politika anankiroa, ary narahina herisetra izany avy eo. Vokany : 29 no maty, 40 mahery no naratra. Nanakorontana an'i Nepal izany trangan-javatra izany.
Melohin'ny Demokrasia ho an'i Nepal io herisetra io nefa kianiny ihany koa ny Maoista ho nanakorontana ny fivorian'ny vahoakan'ny MPRF taloha kely teo tao Bhairahawa sy Nepalgunj . Namoaka fanambaràna an-gazety niaraka tamin'ny ANTA, Fikambanan'ireo Nepali Teraien any Amerika, ry zareo. Safidy tsara indrindra ho an'ny rehetra : Fifidianana amin'ny volana Jona, izany no namaranan'ny DFN azy.
Azon'ny Terai ny antsasaky ny seza rehetra voafidy. Lasa olan'ny Maoista ny fametraham-pialàn'ny Minisitry ny atitany taorian'ilay zava-nitranga tany Gaur, fa tsy olan'ny MPRF intsony, ary ny resadresaka henjana vao haingana nataon'i Om Gurung tany Kantipur dia mampiseho fa tena tsy mifanolo-tànana marina ny Madhesi sy ny Janajati ; noho izany, tsy eken'ny hetsika Madhesi intsony ny hitànana ireo rafi-pifidianana miankina tanteraka amin'ny Antenimiera mpanao ny lalàm-panorenana izay tsy misy afa-tsy ny ho an'ny Janajati.
Navoakan'ny United We Blog ny resadresaka iray nifanaovana tamina mafàna fo iray mpiaro ny zon'olombelona, izay manamafy fa ireo mpanao heloka bevava matianina no nandray anjara tamin'ireo fandringanana. Natoro ny fifandraisana Bihar. Manana sarinà vatana vonton-drà ilay lahatsoratra ary rohy mankany amin'ireo lahatsary youtube.
Milaza ny Maoista fa tsy ry zareo no nanomboka ny adin'i Gaur ( ary ny ekipan'ireo mafàna fo mpiaro zon'olombelona dia nilaza fa ireo mpanao heloka bevava matianina no nanatanteraka ilay fandringanana), tsy nitifitra tamin'ny bala ry zareo. Ny mifanohitra amin'izany aza, teren'ny maoista ny governemanta handray andraikitra amin'ireo mpanafika. Tamin'ny nilazàny ny fanoloran-tenany ho amin'ny dingana fikatsahana fandriampahalemana dia nilaza ny Dr. Baburam Bhattarai, ny lefitry ny antokon'ny Maoista, fa tsy hahasakana ny dingana fikatsahana fandriampahalemana io zava-miseho io.
Ananan'ny INSN ny fanavaozam-baovao. Ny Madhesi – United We Stand no manana fandrakofana tena feno indrindra. Népal – Lesona avy amin'ny zava-nitranga tao Gaur
Nandritra izay volana maro lasa izay, dia nampiasaina ireo mpitantana ny YCL mba hibodo ny tranon'ireo heverina ho tompontany sy mpanaraka ny mpanjaka izay ao anatin'ny lisitra maintin'ny antoko Maoista ; màka olona an-keriny ireo fanomezana ry zareo, misandoka vola, mandroba ireo fahavalo ary ny tena lehibe indrindra dia mifanandrina amin'ireo antoko politika hafa. Ny tanjony voalohany : ireo fikambanana Madhesi isankarazan'ny izay manandratra ny feony ho an'ny fahalalahan'ny Madhesi.
Lazain'ny Nepali Perspectives fa marina ny tenin'ny masoivohon'i Etazonia, Moriarty, fa tsy niova firy ny Maoista.